Atletico Madrid Oo Cristaino Ronaldo & Kooxdiisa Juventus Guuldaro Soo Baday Iyo Toban Ciyaartoy Oo Man City Ah Oo Kulan Waali Ahaa Guul Ka Soo Gaadhay Schalke. - GOOL24.NET
Atletico Madrid Oo Cristaino Ronaldo & Kooxdiisa Juventus Guuldaro Soo Baday Iyo Toban Ciyaartoy Oo Man City Ah Oo Kulan Waali Ahaa Guul Ka Soo Gaadhay Schalke.
February 21, 2019 Mahamoud Batalaale
Manchester City ayaa si layaableh guul uga soo gaadhay kooxda Schalke 04 oo hogaanka ciayarta ka haysay ilaa daqiiqadii 84 aad iyada oo waliba Man City waqtigan ku ciyaaraysay 10 ciyaartoy oo kaliya kadib markii Otamendi kaadhka cas loo taagay.
Man City iyo Schalke ayaa qaatay kulan waali ah oo shan gool layska dhaliyay iyada oo hadba kooxi ay hogaanka ciyaarta haysay. Manchester City ayaa gool ku hormartay laakiin Schalke ayaa laba ugu badashay waxayna sidaa hogaanka ku hayeen in badan oo ciyaarta ah.
Laakiin Leroy Sane ayaa noqday geesiga Manchester City nafta ugu soo celiyay goolka barbaraha halka Raheem Sterling uu indhaha caalamka ku qaday goolka guusha ee ay Man City ka soo heshay Schalke xili ay xataa babraro quus ka taagnayd ayay Sane iyo Sterling xaalada badaleen.
Daqiiqadii 18 aad Manchester City ayaa la timid goolka furitaanka kadib markii uu Sergio Aguero halkiisa ka sii watay gool dhalintii cajiibka ahaa ee uu ku soo jiray wuxuuna caawin ka helay David Silva iyada oo ciyaartu noqotay 1-0 ay Man City hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Daqiiqadii 38 aad Schalke ayaa ciyaarta dib ugu soo laabtay kadib markii rekoodhe lagu abaal mariyay iyada oo Otamendi kaadhka digniinta ah lagu siiyay isaga oo gacan u adeegsaday kubbada waxaana lagu go’aamiyay rekoodhahan muuqaal caawiyaah garsoorka VAR, waxaana Schalke goolka barbaraha u keenay N. Bentaleb kaas oo ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1 ah.
Daqiiqadii 43 aad Schalke ayaa rekoodhihii labaad lagu abaal mariyay waxaana markan kaadhka digniinta ah iyo rekoodhe lagu ciqaabay Fernandinho oo qalad ku galay Salif Sane waxaana goolka labaad ee Schalke goolkan ku dhaliyay isla N. Bentaleb kaas oo ciyaarta ka dhigay 2-1 ay Schalke dhinaca kale ugu dhigtay ciyaartii ay Man City hogaanka kaga hor martay.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid xamaasad badan isla markaana uu saamayn ku yeeshay muuqaal caawiyaha garsoorka VAR laakiin jamaahiirta Man City ayaan ku faraxsanayn VAR iyo sida uu ciyaarta saamayn ugu yeeshay.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-1 ay Schalke hogaanka ciyaarta ku haysay laakiin Man City ayaa ahayd kooxda inta badan ciyaarta soo maamulaysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Manchester City dagaal wayn ugu jirtay sidii ay ciyaarta ugu soo laaban lahayd ee ay marka hore u keensan lahayd goolka barbaraha.
Laakiin Schalke ayaa bilawday in ay si xoogan ugu dagaalanto in ay natiijada ciyaarta ilaashato si ayna Man City u siin fursad ay ciyaarta markooda ugu soo laabtaan.
Daqiiqadii 68 aad xaalada Man Ciy ayaa musiibo isku sii badashay kadib markii kaadhka labaad ee digniinta ah iyo kaadhka cas laysku raaciyay Nicolás Otamendi kaas oo hore kaadhka digniinta ah ugu qaatay rekoodhihii Schalke lagu abaal mariyay waxaana City lagu soo yareeyay 10 ciyaartoy iyada oo gool hogaanka looga hayay.
Daqiiqadii 85 aad Alla Muxuu Gool Ahaa! Manchester City oo ku dhaw in ay ka quusato goolka barbaraha ayuu Leroy Sane soo tuuray kubbad laaga xorta ah oo kooxdiisa loo dhigay meel 30 yards u jirtay goolka Schalke laakiin Sane ayaa awooday in uu darbo cajiib ah ku garaacay Fahrmann kaas oo awoodi waayay in uu wax badbaadin ah sameeyo.
Manchester City oo toban ciyaartoy ahayd ayaa awooday in ay ciyaarta markeeda ku soo laabto iyada oo natiijadu noqotay barbaro 2-2 ah waxaana gool cajiib ah Man City barbaraha ugu keenay Sane oo Guardiola ka dul qaaday culayskii haystay.
Daqiiqadii 90 aad Alla maxay waali ahayd!! Manchester City oo toban ciyaartoy ahayd isla markaana daqiiqadii 84 aad quus taagnayd ayaa heshay goolkeeda saddexaad ee ay gabi ahaanaba dhinaca kale ugu dhigtay natiijadii ciyaarta ee goolka looga hogaaminayay waxaana goolka saddexaad ee City dhaliyay Raheem Sterling oo gool caawin si toos ah uga helay Ederson Moraes wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3-2 ay Man City hogaanka ku soo ceshatay.
Riix 2 si aad kulanka Atletico Madrid iyo Juventus u akhrisato.